स्वैच्छिक अवकाशको सुविधाले सरकारको निजामती सेवा अप्ठेरोमा , अवकाशको उमेर बढाउनमा जोड ! – PuraKhabar
प्रधानमन्त्री ज्यु पागलपनको उपचार गरिहाल्नुस नत्र पछि गाह्रो पर्ला- गगन थापा
मुस्लिम समुदायको आक्रोश ओली सरकारविरुद्ध दन्कियो, पुत्ला जलाएर आन्दोलन सुरु !भिडियोसहितः
अरुण तेस्रोमा पहिरोले थुनिएका चार जनाको ३९ घण्टापछि उद्दार
स्वैच्छिक अवकाशको सुविधाले सरकारको निजामती सेवा अप्ठेरोमा , अवकाशको उमेर बढाउनमा जोड !
February 28, 2018 पुराखबर
सेयर गर्नुहोस Tweet
नेपाल सरकारको निजामती सेवा अप्ठेरोमा परेको देखिँदैछ । किनभने एकैपल्ट करिब पाँच हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको सुविधाको उपयोग गर्ने स्थिति आइपरेको छ । सातवर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सेन) अग्रिमरूपमा एकमुष्ट पाइने र पछि निवृत्तिभरण निरन्तर रहने प्रस्ताव आकर्षक भएकोले नै होला, विशिष्ट श्रेणीका सचिव समेतका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले समेत सेवाबाट अवकाश लिने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।
नयाँ खुलेका प्रदेश सचिवालयहरूमा जाने अनिच्छाले पनि कतिपय कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिनेतर्फ प्रेरित गरेको जानकार क्षेत्रमा चर्चाको विषय भएको छ । प्रशासनमा बसेर काम गर्दा योग्यता, दक्षता र कार्यकुशलता छँदाछदै पनि वृत्तिविकासमा पछि परिने अवस्थाको सिर्जना भएको ठान्नेहरूबीच पनि सरकारी जागीरमा रुचि कम भएको सुनिने गर्छ । यसबीच, आन्दोलन र परिवर्तनका ठूला नाराका साथ भएको राजनीतिक उथलपुथलपछि चलेका समावेशी र समानुपातिकका अभियानले योग्यता र दक्षतामा टिकेका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुनु अपरिहार्य पनि हुन गयो ।
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता स्वीकृत मान्यता हो । सेना, प्रहरीजस्ता निकायहरू वैधानिक तवरले निर्वाचित सरकार मातहत परिचालन हुने निकाय हुन् । निजामती सेवा सर्वोच्च राजनीतिक तहको सहयोगी संयन्त्र हुनाले त्यो बौद्धिक तथा विज्ञताको हिसाबले सशक्त र प्रभावकारी हुनु अति जरुरी हुन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुरूप राज्यव्यवस्था सञ्चालन कार्य निकै गहकिलो उत्तरदायित्व हो । तसर्थ निजामती सेवामा मेहनती, इमान्दार र प्रतिबध्द कर्मचारीहरू नियुक्त हुनु आवश्यक छ । लोकसेवा आयोगको व्यवस्था सम्भवत: यसै प्रयोजनका लागि भएको हो ।
स्वैच्छिक अवकाशको योजना लागू गर्दा एकातिर एकाएक कर्मचारीसंख्या घट्न गै निजामती सेवा कमजोर हुने र अर्कोतिर निवृत्तिभरणको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा थपिने अवस्था आएको छ । त्यसकारण यसमा नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्नु जाती होला । र यसक्रममा अवकाशको उमेर हाल ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाई ६० वा ६२ वर्ष पुर्‍याउने उपाय पनि अपनाउन सक्दछ । आखिर मानिसको औसत आयु बढिरहेको छ भने अवकाशको उमेर बढाउन के बाधा पर्ला र ?
प्रदेश २ मा मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुने प्रक्रिया जारि, आज दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै !
तिर्नुस् कर अब घरबाटै !
June 11, 2018 पुराखबर 0
कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भए प्रचण्ड र गगन थापा बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ
लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विवेचना गर्दै यदि नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन...
May 19, 2018 पुराखबर 0
विप्रेशणको आशमा नेपाल भित्रिएको डिप्रेसन
राम बराल- गत चैत्रमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्यो । अघिल्लो बर्ष चैत्रसम्ममा नेपाल भित्रिएको भन्दा यो बर्ष ५दशमलव ६ प्रतिशत धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आयो । २०७४ साउन देखि चैत्र भित्र नेपालमा ५ खर्व ४० अर्व३८ करोड रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रियो । अघिल्लो बर्ष झण्डै ७ खर्व रेमिट्यान्स भित्रियाएकोनेपालका लागि राष्ट्र बैंकले यो तथ्याँक सार्वजनिक गरिरहँदा खुशीकै कुरा हो । तर त्यहि विप्रेषणले थपेकोचिन्ताको पाटो भनें छुट्टै छ । नेपालमा जुन दरमा विदेशमा काम गर्न जानेहरुले कमाएर पठाउनेविप्रेषणको ग्राफ उकालो लागेको छ डिप्रेसनको समस्या बोकेर फर्किनेहरुको संख्या पनि उहि गतिमा बृद्धिहुँदैछ । घटना १ कावासोती १५ का श्यामकुमार रोजगारीको शिलशिलामाकरिव डेढ बर्ष अघि साउदी अरव गएका थिए । परिवारपाल्न, छोराछोरी पढाउने उद्धेश्यले साउदी पुगेका उनलाईघरको याद निक्कै आइरह्यो । विदेशमा राम्रैसँग कमाउँला,घर बनाउँला, आफन्तलाई पनि उपहार बोकेर फर्किनेउनको आशा चकनाचुर भएको छ । किनकी उनले साउदीअरवमा पुगेपछि नेपालमा भनिएअनुसारको काम पनिपाएनन् र तलव पनि पाएनन् । यसले नेपालमा हरेकमहिना पैसा पठाउने उनको सपना पुरा भएन । १ लाख ५० हजार ऋण लिएर गएका थिए । त्यो ऋणको व्याजले यता नेपालमा श्यामकी श्रीमतिलाईपोलिरहेको थियो । उता साउदीमा रहेका श्यामकुमारलाई आफूले लिएको ऋणको बढ्दो व्याज, त्यो व्याजकसरी श्रीमतिले तिरिन् होला, छोराछोरी कसरी पढ्दै होलान्, के खाए होलान्, श्रीमतिलाई निन्द्रा लाग्यो कीलागेन होला यस्तै चिन्ता बढ्दै गयो । यसले श्यामकुमारमा विस्तारै समस्या देखिन थाल्यो ।खान मन लाग्न छोड्यो, टोलाएर बस्न थाले । मनमा अनेकथरी कुरा खेल्न थाले । मरुँ- मरुँ लाग्न थाल्योउनलाई । केहि दिन विदा लिएर बसेका उनी काम गर्न नसक्ने स्थीतिमा पुगे । त्यसैले कम्पनीले उनलाईनेपाल फर्काइदियो । श्याम फर्किएपछि उनले कमाएर ल्यालान् भनेर बसेको परिवारको सपना सवै चकनाचुर भयो । एकातिरउनी विदेश जाँदा लागेको ऋण त २ लाख छँदैथियो त्यसमाथि ऋण खोजेर उनकी श्रीमतिले भरतपुरमाउपचार गराइन् । उपचारका क्रममा डाक्टरले उनलाई चिन्ता भएको र त्यो चिन्ताको उपचार नगरेका कारणडिप्रेसन भएको बताए । अहिले उनी डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेका छन् र क्रमशः केहि ठिक हुँदै गएकाछन् । घटना २ कावासोतीकै शर्मिला बैदेशिक रोजगारका लागि ओमान पुगेकी थिइन् । ५ बर्ष अघि ओमान पुगेकीशर्मिलाको धेरै ठूलो सपना केहि थिएन । उनी आफ्नो सानो झुपडीमा टीनको छानो हाल्ने सपना देखेरओमान् पुगिन् । तर उनी त्यहाँ पुगेको केहि समयपछि उनले कल्पना नै नगरेको घटना हुन पुग्यो । घरमा एउटी छोरी र श्रीमानलाई छोडेर केहि रकम कमाएर पठाउने आशमा गएकी उनी त्यहाँ बलात्कारकोशिकार भइन् । यद्यपी उनी यो कुरा कसैसँग बताउन्नन् तर उनका अन्य कुराहरुले उनी बलात्कारमापरेको सहजै...
May 14, 2018 पुराखबर 0
प्रेमिका वा पत्निको मुखबाट पुरुषले सुन्नै चाँहदैनन् यी ५ कुरा
महिला र पुरुषको सम्बन्ध प्रेममा मात्र होइन विभिन्न उतार चढावमा आधारित हुन्छ ।कतिपय कुरा यस्ता छन्...
June 18, 2018 पुराखबर 0
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी अाेली चाैतर्फी कुरा सुनेर विकासका एजेन्डालार्इ गलत अर्थ लगाएका...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कमयुनिष्ट सरकारले सार्वजनिक विदा कटौती गरेपछि मुस्लिम समुदाय आन्दोलित बनेको छ।...
वि.सं. २०७५ आषाढ ०४ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ जुन १८ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके...
संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर ll share गरि पुन्य कमाउ
एजेन्सी, संसारकै सबैभन्दा ठुलो हिन्दु मन्दिर जो कम्बोडियामा रहेको छ । कम्बोडियाको ठुलो क्षेत्र्मा फैलिएको यो मन्दिरको निर्माण सम्राट सुर्यवर्मन द्वितीयले आफ्नो शासनकालको इश्बी सम्बत १११२-५३मा यस मन्दिरको निर्माण गरेका हुन् । मिकांग नदिको किनारमा रहेको सिमरिप शहरमा यो मन्दिर रहेको छ । सयौ वर्ग माइलमा फैलिएको यस...
February 10, 2018 Devika 0
फेसबुक कि खडकेनी ?
कथाः -दीपक घिमिरे अचम्मको छ फेसबुक । उतिबेला खास्सै चलाउन जानिएन, जतिबेला जवानी थियो । जवानीमा...
February 8, 2018 Devika 0
गीत हिट भएपछि बाइक
काठमाडौँ — गीतकार, गायक एवं संगीतकार राजनराज सिवाकोटीका चार गीतले युटयुबमा एक करोडभन्दा बढी भ्युज पाएका...
January 27, 2018 Devika 0
आर्थिक अभावले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने ऋषिको सपना अधुरै
दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ३ का ऋषि परियारलाई आफ्नो कला गिनिज बुकमा लेखाउने सपना छ। तर...
June 17, 2018 पुराखबर 0
फिल्ममा काम नपाएपछि शाहरुखको फिल्मबाट डेब्इू गरेकी यि चर्चित नायिकाले थालीन् यस्तो काम, परिवार धान्न नै धौ धौ भएपछि यस्तो काम सुरु गरेको दिइन् प्रतिक्रिया
एजेन्सी। शाहरुख खानसँग काम गर्न त के स्क्रिन शेयर गर्न पाउने जो कोही कलाकारले पनि आँफुलाई...
June 16, 2018 पुराखबर 0
तेरिया मगर अब फिल्ममा, को हुनेछन् उनको नायक ?
भारतीय चर्चित डान्स रियालिटी शो डिआईडीकी बिजेता डान्सर तेरिया मगर अब चलचित्रमा पनि देखिने भएकी छिन्...
सलमानसँग काम गर्न प्रियंकाले मागिन् यति धेरै पारिश्रमिक, सलमान आफैं परे चकित !
मुम्बइ। प्रियंका चोपडा आफ्नो प्रेम सम्बन्धका साथै सलमान खानसँग फिल्म भारतका विषयमा चर्चामा छिन् । यो...
आज ब्राजिलको तगारो बन्न सक्ने यस्तो छ स्वीट्जरल्याण्डको ईतिहास !
काठमाडौ – स्वीट्जरल्याण्ड युरोपको बलियो टिम हो, जसले दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिललाई दबाबमा पार्न सक्छ । तर...
अर्जेन्टिनालाई आइसल्यान्डले बराबरीमा रोक्यो, यसरी चुके पेनाल्टीमा मेस्सी (भिडियो)
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलको २१ औँ संस्करणको खेलमा अर्जेन्टिना र आइसल्यान्ड बराबरीमा रोकिएका छन् ।...
अर्जेन्टिले र आइसल्याण्ड एक-एक गोलको बराबरीमा
काठमाडौं । अर्जेन्टिले र आइसल्याण्ड एक-एक गोल हानेको छ । अर्जेन्टिनाले होको केहि मिनेटमा नै गोल होनेको...